सचेत बन्नुहोस् ! यी बानीले नै जो कोहीको किड्नी फेल : सचेतनाका लागि सेयर गरौँ – ताजा समाचार
काठमाडौ । नेपाल जस्ता विकाशोन्मुख देशहरुमा मानिसको अभिन्न अंग मानिने मृगौला (किड्नी) धेरै फेल हुने गरेको छ । किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभिन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्या*नै गुमा*उनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ ।
तसर्थ किड्नी भनेको के हो ? मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ ? किड्नी कसरी काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ ? किड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? यी यवत कुराहरु सबैले जान्न जरुरी छ । ग्राण्डी अस्पतालको विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज ज्ञवालीसँगको कुराकानीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा आज हामी किड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु प्रस्तुत गर्दैछौ । आफुले पढिसकेपछि सबैको जानकारीका लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला ।
आफुले पढिसकेपछि सबैको जानकारीका लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : November 3rd, 2019,